RN 2 – Toamasina : voahitsaky ny kamiaobe, potipotika ny vatan’ilay lehilahy | NewsMada
RN 2 – Toamasina : voahitsaky ny kamiaobe, potipotika ny vatan’ilay lehilahy
Nampihoron-koditra! Potipotika ny vatany, niboraka ny tsinainy, nandriaka eran’ny arabe ny ra. Io ny nahazo ny lehilahy iray voahitsaky kamiaobe tao Tanandava Barikadimy Toamasina, RN 2, ny alakamisy alina teo…
Nivoraka eran’ny arabe ny tsinain’ilay niharam-boina, tapatapaka niala ny vatany ny rantsam-batany rehetra. Teo Tanandava Barikadimy mialoha ny hidirana ny tanànan’i Toamasina renivohitra ny nitrangan’ny loza. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, kamiaobe iray hihazo an’Antananarivo no tompon’antoka tamin’ity loza mahatsiravina ity. Voahitsaka ary notetezin’ny kodiaran’ny fiara mihitsy ilay niharam-boina, saingy tsy nijanona fa nanohy diany nitsoaka ny mpamilin’ilay kamiaobe. Tsy nisy nahita rahateo ny fitrangan’ny loza fa ilay kamiaobe nitsoaka kosa no nisy nahatsikaritra, saingy tsy nisy nahazo ny laharan’ity kamiaobe nahavanon-doza ity. Nitampim-bava sady tsy te hijery ireo olona nahita ny fatin’ilay niharam-boina. Nanambara kosa ny fianakavian’ilay niharam-boina fa tsy hita ity lehilahy niharam-boina ity ary efa nanao fitarainana momba izany izy ireo kanjo ny fatiny voahitsaky ny kamiaobe sisa nahalalan’izy ireo azy. Nilaza ny fianakaviany fa tsy salama saina ity lehilahy voahitsaky ny kamiaobe ity. Tsy mbola nikasa nanao famonoan-tena kosa izy na teo aza izay tsy fahasalamany izay, raha ny voalazan’ny fianakaviany hatrany.
Fiara R. Kangoo iray koa namoa-doza tao Salazamay Toamasina, ny alakamisy alina teo ihany. Voalazan’ny fampitam-baovao fa mamo ny mpamily nefa nandeha mafy ka nifatratra tamin’ny tuc tuc iray nijanona teo amoron-dalana. Nipitika lavitra vokatry ny dona nahazo azy ilay tuc tuc sy ny mpamiliny. Nitsoaka avy hatrany ilay mpamily nahavanon-doza ary avotra soa aman-tsara ireo olona nentiny. Voarain’ny polisy anefa ny laharany ka mitohy ny fikarohana azy.